Miandry hatrany ny Fanahy
"Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo" Jao. 14:26.
Miandry hatrany ny hanao ny asany ao am-pon 'ny olom-belona ny Fanahy Masina. Ireo izay maniry ny hianatra dia afaka mametraka ny tenany hifandray ety amin'Andriamanitra, ary ho tanteraka ilay teny fikasana fa hampianatra azy ireo ny zavatra rehetra ilay Mpananatra, ary hampahatsiaro azy ny zavatra rehetra, izay rehetra nambaran ' i Kristy tamin'ny mpianany fony izy tety an-tany. Kanefa raha misaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy afaka ny hijanona ho mpianany intsony ao amin'ny sekolin'i Kristy. Ary aorian'izay dia tsy ho tsapantsika ny enta-mavesatra manokana momba ireo fanahy izay nahatonga an' i Kristy ho faty.
Sarotra indrindra ho an'ny mpianatra ny nanavaka mazava tsara ny lesona nomen'i Kristy tamin'ny fombafomba sy ny fananarana nomen'ny raby sy ny mpanora-dalana ary ny fariseo. Nanan-kery teo amin'ny sain'ny mpianatra ary namolavola ny fihetseham-pony ny fampianarana izay nanabeazana azy sy nasaina nohajainy ho feon'Andriamanitra. Tsy nety ho tonga fahazavana velona sy mamirapiratra ny mpianatra raha tsy afaka tamin'ny fanagejan'ny hery miasa manginan'ny teny sy baikon'olombelona, ary koa raha tsy voarakitra lalina tao an-tsainy sy tao am-pony ho fahamarinana tena miavaka ny tenin'i Kristy izay tahaka ny firavaka sarobidy natao hankafizina sy hotiavina ary hampiharina.
Tonga teto an-tany i Jesosy, niaina fiainana masina, ary maty mba hametraka amin'ny fiangonana ny lovany ao anatin'ireo harena sarobidy izay nomeny azy ireo. Ny mpianany no nametrahany ireo foto-pampianarana sarobidy izay natao hapetraka eo am-pelatanan'ny fiangonany, tsy miharoharo amin'ny fahadisoana sy fomban-drazan'olombelona. Niseho ho fahazavan'izao tontolo izao tamin'ny mpianany Izy, Ilay Masoandron'ny fahamarinana. Ary nampanantenainy azy ireo ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, izay halefan'ny Ray amin'ny Anarany. – ST, 16 Nov. 1891.
"Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho" - Jao. 14:18. Ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny, ireo no Ilay Fanahy avy any an-danitra, izay nampanantenain'Ilay Mpanavotra an'izao tontolo izao fa halefany. Tsy havelan'Andriamanitra ho ao anatin'ny tontolo tsy misy ny fahasoavany ny olony mba ho hozongozonin' ilay fahavalon'Andriamanitra ary hiaran'ny famoretan'izao tontolo izao, ho avy eo amin' izy ireo Izy. - ST, 23 Nov. 1891.